January 2019 – siifsiin
Boqqolloo qonnaan bade Garbun qonnaan maseenee Nutu wallaale malee Yaggus beelli nu seenie Alagaan dhufnaan hoorii Firri dhufnaan wagidii Nutu wallaale malee Yaggus roorroon nu seenee.
Namni namoota injifatu nama cimaadha. Namni ofiisaa injifatu ammo nama hundumaa caala.( Laawoo – 8ffaa) Waanti nama beekamaa sitasisu waanta ta’uu barbaaddu taatee argamuudha. (Sookiraataas) Irra deddeebi’anii yaaluun salphina miti. Carraa gaarii ta’uu isaatu ittiin saqarama. (Joorji Maatiyaas. ) Sammuu keenyake essatti jannataafi gaannamiin namuu nidandeenya. (Mitten) Utuu of hingargaarin eenyuuniyyun gargaaruu hindandeessu (Giris Mori) Rakkinni hamma si … Continue reading Jechoota Hayyootaa
Maqaafi Ilmoo kana beektuu
Nama ------------------------ Mucaa Arba ------------------------- Dhobilee Adurree ---------------------- Bashoo Bosonuu --------------------- Simboo Booyyee --------------------- Qoqalaa Bofa -------------------------- Leetii Buutii ------------------------ Lootii Farda ------------------------- Ciloo Gaala ------------------------- Nyarqoo Guchii ----------------------- Ruphoo Gada ------------------------- … Continue reading Maqaafi Ilmoo kana beektuu